Ma suroobi karaa waddo inuu ka soo kabsado xiriirada ka laftiisa 4s iPhone?
Waxaan si qalad ah la tirtiro dhowr xiriirada ka iPhone 4s, waxayna iloobaan in iyaga dib la Lugood. Hadda waxaan u baahan si deg deg ah, laakiin waxaan maqlay in aysan jirin hab inuu ka soo kabsado xogta tirtiray on iPhone ah marka laga reebo iyada oo gurmad ah. Ma dhab ahaantii? Waxaan soo kaban karaa xogta ka iPhone laftiisa aan gurmad Lugood? Fadlan caawi Thanks ka hor.
Hadalkaan ma jirto si ay u soo kabtaan xogta iPhone aan gurmad Lugood gabi ahaanba waa qalad. Sababo la technology gaarka ah ee qalabka macruufka, inay aad u adag tahay inuu ka soo kabsado xogta si toos ah uga iPhone laftiisa, laakiin ma ahan wax aan macquul aheyn. Dhab jira barnaamij sida oo awood aad ka bogsato xiriirada ka iPhone 6 Plus a / 6 / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS aan Lugood gurmad files: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone _1_672_1 _) (Win) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka ( iPhone Data Recovery) (Mac) (diyaar u Mavericks).
Fiiro gaar ah: Haddii aad synced aad iPhone la Lugood aad PC ama Mac ka hor laga badiyay aad xiriirka la leedahay, waxa kale oo aad soo kaban karto, aad xiriir hore oo ay soo saarida gurmad Lugood ah.
Talaabooyinka ah sida inuu ka soo kabsado xiriirada iPhone aan gurmad
Tutorial hoose waxay ku saabsan tahay nooca Windows ee Wondershare Dr.Fone ee macruufka. Haddii aad tahay user Mac ah, fadlan akhriso hagahaan ee Wondershare Dr.Fone (Mac) halkan: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Mac) User Guide .
Ka hor inta soo kabsaday xiriirada iPhone tirtiray, waxaad u baahan tahay in la ogaado in aanad u isticmaalin iPhone wax ka dib markii laga badiyay aad xiriirka la leedahay, sababta oo ah wax kasta oo qalliin aad iPhone overwrite laga yaabaa in xogta lumay. Sida ugu wanaagsan ee ay tahay in korontada aad iPhone ilaa aad ka soo dhacsaday xiriirada iPhone lumay.
Hadda raac talaabooyinka soo socda inuu ka soo kabsado xiriirada iPhone tirtiro iyada oo aan wax gurmad ah files.
First of dhan, xiriiriyaan iPhone si aad u computer, ka dibna ay maamulaan Wondershare Dr.Fone ee macruufka. Halkan waxa ku jira saddex hababka soo kabashada bixiyo: kabsado iDevice, ka soo kabsado Lugood File kaabta iyo soo kabsado iCloud File kaabta. Just joogo default ka mid ah.
Wixii iPhone kala duwan, waxaad geli kartaa siyaabo kala duwan ka dib markii aad soo kabashada xiriiriyaan iPhone. Hoos waxaa uu furmo suuqa weyn ee dhan iPhone.
Wixii iPhone 4 / 3GS, waxaad dooran kartaa inaad u tagto Mode Advanced si aad u hesho baaritaan qoto dheer u ah iPhone. Just guji badhanka ee midigta hoose-geeska.
Tallaabada 2. Scan la tirtiro xiriirada aad iPhone
Sida iPhone 6 Plus / 6 / 5S / 5C / 5 / 4s dadka isticmaala, waxaad si toos ah guji kartaa "Start Scan" button ka dib markii isku xira qalab aad. Markaas barnaamijka si toos ah ayaa bilaabi doona in ay baarista iPhone 6 Plus / 6 / 5S / 5C / 5 / 4s xiriirada tirtiray waxa on.
Si aad u soo kabsado xiriir la tirtiro si toos ah uga iPhone 4 / 3GS, waxaad u baahan tahay in ay galaan hab iskaanka qalab ee sawirka ka hor. Raac tallaabooyinka hoose:
Saxaafadda Power iyo badhamada Home aad iPhone waqti isku mid ah ee saxda ah 10 ilbiriqsi. Software tirin doonaa waqtiga aad u.
Marka 10 ilbiriqsi ka soo gudubtay, sii daayo button Power isla markiiba, Laakiinse ay xajiyaan haysta button Home ah. 10 ilbiriqsi oo kale ka dib, waxaa laguu sheegi doonaa in aad si guul leh ku soo gashay habka iyo aad u sii daayo karaa button Home hadda.
Markii barnaamijka bilaabo inuu baarista iPhone ee xiriirka la tirtiray, furmo suuqa waa sida hoos ku qoran.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha & kabsado tirtiray xiriirada iPhone
Scan ka dib, waxaad ku eegaan kartaa dhammaan xogta la soo helay Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) . Dooro "Xiriirada" dhanka bidix oo aad ku eegaan kartaa dhammaan xiriirada aad la tirtiro halkan soo socda, oo ay ku jiraan horyaal shaqo, cinwaanada, iyo in ka badan.
Xogta laga helay halkan waxaa ka mid ah kuwa xiriirada aad haddeer haysatidna aad iPhone. Haddii aad rabto oo kaliya in ay dib u soo ceshano xiriirada tirtiray ka iPhone, noqon badhanka dusheeda on: bandhigaan waxyaabaha tirtiray oo keliya. Markaas calaamadee ceshan iyaga. Waxa kale oo aad eegi kartaa tutorial video hagahan ah:
Fiiro gaar ah: Waxaad dajiyaan karaa xiriirada kabsaday dib si aad u iPhone, waxaad isticmaali kartaa Wondershare TunesGo , kaas oo kuu ogolaanaya in aad soo dhoofsadaan iyo xiriirada iPhone dhoofinta si xor ah.
> Resource > iPhone > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray iPhone Xiriirada aan kaabta